Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguOlga
Amagumbi odidi oluphezulu abekwe kwindawo entle ezolileyo ecaleni kwehlathi, 900m ukusuka kwiMill Colonnade enemithombo emininzi kunye nentliziyo yeKarlovy Vary.
Iimpungutye kunye neehagu zasendle zinokujongwa kanye kwifestile yendlu ngokuhlwa kwangokuhlwa. Indlela eya kwindawo yokujonga iDiana ikufutshane nendlu, kwicawa yaseRussia kunye nevenkile yokutyela epholileyo echibini nje imizuzu embalwa yokuhamba.
Le ndlu inegumbi lokulala, igumbi lokufunda, igumbi lokuhlala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-dishwasher, i-oveni ye-combi, i-oveni, i-microwave kunye ne-Nespresso umenzi wekofu, umatshini wokuhlamba. Kukho indawo yokutyela eneTV enescreen esisicaba.
Indawo yeVilla Dionysus yahlukile, siziimitha ezingama-800 ukusuka kwimithombo esembindini weKarlovy Vary. Kodwa kule meko kwindawo yehlathi ekhuselweyo. Azisekho izakhiwo ezinje esixekweni. Uya kuba wedwa kunye nendalo kwaye kwangaxeshanye kumgama wokuhamba ukusuka kwimithombo yokuphilisa!